News | imran
News | Tag: imran
‘प्रधानमन्त्री इमरान खानले राजीनामा दिनुपर्छ’
एजेन्सी ।पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा विपक्षी दलले सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको छ ।
एजेन्सी । इरानको भ्रमण सम्पन्न गरी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान मंगलबार साउदी अरेबिया पुग्ने भएको छ । अरब खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कटका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री खान इरान र साउदी अरेबियाको भ्रमणमा छन् ।
प्रधानमन्त्री हुन त इमरान खानजस्ताः देशलाई आर्थिक भार नपारी यसरी पुगे अमेरिका
एजेन्सी । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै इमरान खान चर्चामा रहेका छन् । उनले देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै आइरहेका छन् ।
इमरान र मोदीबीच वार्ता हुने सम्भावना !
एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मिरलगायत सबै विवादलाई संवादमार्फत् समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।
सरकारी सेनाका उच्च कमान्डरको मृत्यु
यमन । यमनको सरकारी फौजका एक जना बरिष्ट कमान्डरको हुथी विद्रोहीसँगको झडपमा मृत्यु भएको छ । यमनी सेनाका एक अधिकारीका अनुसार दक्षिणी ढाली प्रान्तमा हुथी विद्रोही र सेनाबीच भएको भिडन्तका क्रममा उक्त घटना भएको हो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको कति छ सम्पत्ति ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा छन् पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान । देशका लागि केही गर्ने आाँट देखाएका उनले पाकिस्तानको विकासका लागि फण्ड जम्मा गर्ने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले पहिलोपटक गरे मन्त्रिपरिषदमा व्यापक फेरबदल
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बिहीबार पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदमा व्यापक फेरबदल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री खानले पाँच जनालाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्नुका साथै चार मन्त्रीको कार्यभार हेरफेर गरेका छन् ।
एजेन्सी । अभिनय क्षेत्रका एक महान् हस्ती हुन् इमरान खान । तर, पछिल्लो समय उनी एउटा डरलाग्दो रोगसँग लडिरहेका छन् ।